Imihlahlandlela Yokuthenga - Jiangyin Brenu Industry Technology Co., Ltd.
Ezweni lanamuhla lamaphakeji ahlukile kubalulekile ukuthi amakhasimende azinike isikhathi sokucwaninga imishini, intuthuko ye-intanethi kahle kakhulu, umshini wekhwalithi nensizakalo ekuzungezile okubaluleke kakhulu, i-BRENU ingenye yefektri enikeza ukusekelwa kwezobuchwepheshe unomphela.
Ngaphambi Kwe-oda Umshini Owaziyo
Ngabe imishini iyathuthukiswa futhi iyahleleka?
Ngabe zizokhula nenkampani yakho?
Yiziphi izici ezijwayelekile futhi yini eza njengezinketho?
Ngabe imishini kulula ukuyigcina futhi ihlanzeke?
Ngabe zonga amandla?
Ngabe imishini iza nemibhalo efanele kanye nemanuwali?
Ingabe izingxenye ezijwayelekile, ezijwayelekile, nezokugqoka zitholakala kalula emshinini?
Ngensizakalo eku-inthanethi nayo yonke ividiyo?
Kungani Khetha iBrenu?
Izikhathi zokuhola ezisheshayo nezandla emibonisweni.
Izinqubo zokukhiqiza ze-BRENU, zivumela ezinye zezikhathi zokuhola ezisheshayo embonini ngisho nasezinhlelweni ezizenzakalelayo nezijikelezayo ngokuphelele.
Insizakalo yesazi, ukusetha, nokuqeqeshwa kulayini noma kuvidiyo
Ukugcinwa, ukuqeqeshwa, nokufakwa konke kuyizinsizakalo i-BRENU enikeza amakhasimende. Ukufakwa okufanele nokusetha kuyisihluthulelo ekwenzeni imishini emisha isebenze ngokushesha nangempumelelo ngangokunokwenzeka. I-BRENU iyakuqonda lokhu, futhi yingakho yonke imishini ye-BRENU ishiya ifektri ilinganiselwe izidingo zamakhasimende ngamunye. Ochwepheshe be-BRENU baphinde baqeqeshe amakhasimende ethu ukuthi angakwandisa kanjani ukusebenza futhi anciphise isikhathi sokuphumula somshini ngasikhathi sinye, sinikezela ngenkonzo elayini ngohlelo lokusebenza, sixoxa noma ngenye indlela.
B. Imishini yokuklama ekhula kanye nekhasimende.
Enye yezinto ezibalulekile zemigqa yokupakisha ye-BRENU ukuthi yakhelwe ukwamukela uhla lwamaphrojekthi ahlukahlukene. I-BRENU iyazi ukuthi umkhiqizo udinga ushintsho njengoba isikhathi sihamba futhi imigqa yethu yakhelwe ukukhula ngalezo zidingo. Umshini ngamunye wenzelwe ukuphatha imisebenzi eminingi futhi ushintshe phakathi kwaleyo misebenzi ehlukene ngaphandle kokuphumula okuncane. Lokhu kwenza imishini ye-BRENU ibe utshalomali olungcono kakhulu uma iqhathaniswa namakhono alinganiselwe amamodeli esincintisana nawo.
C. Esitokweni nasekulethweni okusheshayo kwezingxenye.
Indawo yokugcina impahla ye-BRENU 10,000 sqr ft iphethe izingxenye ezahlukahlukene ezingama-27,000. Zonke izingxenye eziyinhloko zimakwe ngokuhlonza okulula kuzo zombili ikhasimende kanye nochwepheshe wezingxenye ohlinzeka ngokuhlonza okusheshayo nokulethwa.
D. Ukwazi nokukhumbula amakhasimende ethu.
Ukugcinwa kwerekhodi: I-BRENU isebenzisa isoftware yesimanje yeCRM ukugcina i-akhawunti eningiliziwe yakho konke okubandakanya izithombe, ilog yokukhiqiza, ibhodlela, ikepisi, ilebula, amasampuli, kuze kufike osukwini lokuzalwa lwemishini. Siphinde safaka i-rolling library rolling ukugcina umkhondo wezinkulungwane zemishini imidwebo yabo, namakhasimende